Daw Yin Yin Myint presented her Credentials to His Excellency Mr. Miloš Zeman, President of the Czech Republic – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Yin Yin Myint, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Czech Republic, presented her Credentials to His Excellency Mr. Miloš Zeman, President of the Czech Republic on 22 March 2016, in Prague.
Dated. 31 March 2016
ချက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဥ်ယဥ်မြင့် သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပရပ်မြို့၌ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မီလော့စ် ဇီးမန်း ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်